Global Voices teny Malagasy » Brezila, navadik’ireo mpakasary ho toy ny trano fanasàna sary hanehoany ny fihibohan-dry zareo ny trano fonenany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Aogositra 2020 3:10 GMT 1	 · Mpanoratra Giovana Fleck Nandika (fr) i Laila Le Guen, imanoela fifaliana
Sokajy: Amerika Latina, Brezila, Hevitra, Mediam-bahoaka, Saripika, Vaovao Tsara, Zavakanto & Kolontsaina, COVID-19
Nisy fotoana, tany am-piandohan'ny volana Aprily , nahatsiaro ho sahirana izy. Vao avy nodinganin'i Brezila ny isa 7 000 tamin'ny tranganà  ‘coronavirus’, araka ireo tarehimarika navoakan'ny sampandraharaha misahana ny fahasalamam-bahoaka tany amin'ireo fanjakàna samihafa, ary efa nihoatra ny 250 sahady ireo matin'ilay aretina. Toromariky ny ministeran'ny fahasalamana ny hitondràna arontava mba ho fepetra fiarovana.
Ny 3 Aogositra, nahatratra 2,7 tapitrisa no isan'ireo tranga voamarina tao amin'ny firenena, ary olona 94 665 no namoy ny ainy, araka ny vaovao nampitain'ny ministeran'ny fahasalamàna . Laharana faharoa manerana ny tany amin'ny resaka isan'ny namoy ny ainy  vokatry ny COVID-19 no misy an'i Brezila, manaraka an'i Etazonia.
Na nandalo fiovàna marobe aza ny sehatry ny fakàna sary tato anatin'ny taompolo vitsivitsy lasa, mitovy ihany ny fotokevitra ijoroana : ny fitaovana fakàna sary dia mitoetra hatrany ho boaty mainty iray misy lavaka kely ahafahan'ny hazavana miditra , ka ahafahana mandrakitra sary amin'ny alàlan'ny akora mora mirakitra sary (na fitaovana nomerika izy, na taratasy arzantika).
Tao Brezila, tamin'ny Febroary no natao ny hetsika voalohany nataon'ny governemanta hiatrehana ilay valanaretina. Tamin'izany no nisy Breziliàna 34 nampodiana avy any Wuhan, Shina. Ny 26 Febroary no hita ny fisian'ny tranga voalohany voamarina tao amin'ny firenena,  tao São Paulo. Tamin'ny Martsa no voarakitra ny olona voalohany namoy ny ainy noho ny valanaretina coronavirus, vehivavy iray mpiasa an-trano  [Angl] mponina tao Rio de Janeiro. Nohafainganin'ireo tomponandraikitra ara-panjakana sy monisipaly araka izany ny fametrahana ireo fepetra momba ny elanelana. Nampihatra ny fiasàna avy any an-tranony ireo olona afaka nanao izany.
Araka izany, tapaka ny hevitr'ilay mpakasary fa hamoaka ny vokatra ao amin'ny kaontiny Instagram , sy hanasa namana sy mpiaramiasa roambinifolo hafa hanao toy izany koa.
Vetivety foana i Bruno Alencastro dia voatondro tanaty saripika ampolony maro isanandro, ary mpampita vaovao erantany marobe no  [Angl] niresaka ilay tetikasa. Teo araka izany no nandraisany fanapahana ny hanao ho ofisialy ny maha-tetikasa ifandrimbonana ny « Obs-cu-ra », tamin'ny alàlan'ny fanatontosàna lahatsary iray  nataony hanomezana torohevitra momba ireo teknika tsara indrindra mba hananganana efitrano mazina ho an'ny tena.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/08/07/149296/
 tany am-piandohan'ny volana Aprily: https://jovempan.com.br/noticias/brasil/coronavirus-brasil-2-de-abril.html
 Vao avy nodinganin'i Brezila ny isa 7 000 tamin'ny tranganà: https://www.sanarmed.com/linha-do-tempo-do-coronavirus-no-brasil
 vaovao nampitain'ny ministeran'ny fahasalamàna: https://susanalitico.saude.gov.br/extensions/covid-19_html/covid-19_html.html
 Laharana faharoa manerana ny tany amin'ny resaka isan'ny namoy ny ainy: https://covid19.who.int/table
 boaty mainty iray misy lavaka kely ahafahan'ny hazavana miditra: https://www.youtube.com/watch?v=JzDVIJ3TdfA
 hita ny fisian'ny tranga voalohany voamarina tao amin'ny firenena,: https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/47215-primeiro-caso-de-covid-19-no-brasil-permanece-sendo-o-de-26-de-fevereiro
 vehivavy iray mpiasa an-trano: https://globalvoices.org/2020/07/20/invisible-hands-how-millions-of-domestic-workers-fare-under-covid-19/
 mpampita vaovao erantany marobe no: https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/photography/pandemic-portraits-pinhole-brazil-photos-coronavirus-lockdown-a9512906.html
 fanatontosàna lahatsary iray: https://www.instagram.com/tv/CAiVcY0Aidl/